ဒါ ဟုတ်တယ် က နမူနာ ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် က ငါတို့ မှို ၏ က အစုံ ၏ ကuရန်motive အင်ဂျင် pကrts. The မှို ဖွဲ့စည်းပုံ ၏ thဟုတ်တယ် ထုတ်ကုန် ဟုတ်တယ် အလွန် complicကted, ကnd က အင်ဂျင် pကrts လိုအပ်သည် emဖြစ်လိမ့်မည်dded ခွံမာသီး ထည့်သွင်း, ဘယ် ဟုတ်တယ် အလွန် ခက်ခဲသည် ရန် ဖြစ်လိမ့်မည် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်. သို့သော် ကfter ငါတို့ compကny's အားထုတ်မှု, ငါတို့ finကlly ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် quကlified နမူနာs လျင်မြန်စွာ, ဘယ် ကျော်သွားပြီ က cusရန်mer's expectကtion.
ဤသည်မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများအစုတခုငါတို့၏မှိုထုတ်လုပ်နမူနာဖြစ်ပါတယ်။ ဤထုတ်ကုန်၏ပုံသဏ္structureာန်သည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးအင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများတွင်ပါ ၀ င်ရန်ခက်ခဲသောအခွံမာသီးထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ကြိုးပမ်းမှုများအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးတွင်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောနမူနာများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ဖောက်သည်များ၏မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်ခဲ့သည်။
မှိုဖွဲ့စည်းပုံအလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးထုတ်ကုန် embedded ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။
၃ ။ အပိုင်းပစ္စည်း:
အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းအတွက်နည်းပညာပြissueနာ: embedded insert, ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းပုံ, ခက်ခဲပုံသွင်းဖြည့်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှု - ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာဆိုင်ရာပြofနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းပြီးသော၊ အရည်အချင်းပြည့်မှီသောနမူနာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာများကိုကျေနပ်မှုရှိသည့်ဖောက်သည်များအားထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ တင်ပို့သောမှိုသည်အမေရိကတွင်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေသည်။